Tena Pirate Bay - Download mozika, sarimihetsika, maimaim-poana!
Fomba tsara indrindra hanamafisana ny fanandramana ao amin'ny The Pirate Bay [Nohavaozina ny aprily 2019]
Mety ho havana ihany ny fotoana nefa voafetra ihany koa. Mbola vitsy ny andro tsy maintsy handaniantsika eto amin'ity planeta-saintsika ity. Ny fiandrasana ny riaka miadana dia tsy tokony ho izao fomba ataontsika izao.
Ny Pirate Bay dia malaza amin'ny fanomezana fanomezana haingana sy mahomby amin'ny atiny izay tadiavinao. Io laza io dia satria maro ny mandray anjara amin'ny famolavolana sy ny fampidinana matetika tsy tapaka, manampy amin'ny famoronana vondron'olona mpampiasa mitovy hevitra mifanohana.
Azonao atao ny mahita bebe kokoa momba ny The Pirate Bay eto raha tsy zatra ny sehatra ianao: https://www.thepiratebay.wiki.
Rehefa sendra ony mikoriana miadana ianao dia mety noho ny tsy fisian'ny seeders na ny votoatin'ny rakitra ratsy. Ho an'ny mpampiasa antonony, tsy ao amin'ny The Pirate Bay ny olana. Miaraka amin'ny fanamboarana izay ananany ao an-trano.
Fomba faran'izay tsotra indrindra hanatsarana ny lahatahinao Download
Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny fampidinana sy fandefasana haingam-pandeha izay notononin'ny ISP anao nandritra ny tsenan'ny varotra dia manome ny taha ambony indrindra azonao tratrarina. Ny ankamaroan'ireo faritra dia mahalana manakaiky ny salan'isa voalaza. Amin'ny maha-fitsapan-kevitra amin'ny ankapobeny ny tsara, dia tsara ny mandefa ny hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandeha 50% haingana noho ny heverinao fa ilaina mba hahazoana antoka fa afaka manana traikefa tsara indrindra ianao.
Midika izany fa raha mieritreritra ianao fa 50 Mbps dia haingana mba hanomezana izay ilain'ny hafainganam-pandehan'ny Internet, dia tokony hifidy ny 75 Mbps kosa ianao.
Zava-dehibe koa ny mahatadidy fa ny MBps sy Mbps dia samy manana ny fanendrena azy. Raha manana 1.44 MBps ianao, dia io no mitovy eo amin'ny 11,5 Mbps. Ny fampiasana ny "B" dia midika fa mifindra amin'ny megabits mankany megabytes isan-tsegondra.
Vantany vao mionona ny hafainganam-pandehanao ianao dia misy fomba fanampiny hanatsarana ny zavatra niainanao ao amin'ny The Pirate Bay.
1. Zahao ny làlanao sy ny maoderina
Raha sendra fifandraisana Internet miadana ianao, dia mety ny hanome tsiny ny modem-paninao. Inona no zavatra voalohany ataonao rehefa tojo data dropout ianao? Ianao dia manavao ny modem. Raha tsy mandeha izany, dia esory ny lalana, ary ampidiro ao indray. Mety mila manavao ireo fitaovana ireo ianao raha sendra misaraka matetika, rehefa mikoriana.
2. Arakaraka ny rafitrao
Fantatrao ve hoe oviana no fotoana farany izay nitady otrikaretina tamin'ny rafitrao? Ny solosaina, mpiady ary entana hafa tsy tiana dia afaka manondraka ny loharanon'ny solosainao. Rehefa mitranga izany dia mijaly ny hafainganam-pandehanao. Mety hanampy ny fanaovana scanner isan'andro, indrindra raha misintona ny riaka matetika.
3. Mampihena ny fitsabahana amin'ny rafitrao.
Misy vokatra antsoina hoe Webroot izay miasa amin'ny Mac®. Raha toa ka miasa izy, dia manelingelina ny rafitr'asa ka tsy ahafahanao mampiasa intsony ny asan'ny jadona. Tsy maintsy akatonanao ilay rindrambaiko ahafahana miakatra eo am-baravarankely ny fikandrana feo. Betsaka ny programa sy sehatra maro mety hiteraka fitsabahana amin'ny fizotran'ny fisintonana na hafainganana Internet.
4. Mbola mandeha sivana ve ianao?
Raha ao amin'ny fifandraisana DSL ianao fa tsy Broadband ho an'ny Internet, dia mety ho olana ny sivilanao. Ny fikorontanana mitranga amin'ny tsipika dia mety hiteraka tampoka tampoka, fanerena anao hifandray indray. Olana iray hafa amin'ity toe-javatra manokana ity hojerena ny fisian'ny telefaona tariby. Manandrama mandalo fitsapana mitokana mba hahitana raha misy unit iray manokana mamorona ireo olana atrehinao amin'ny The Pirate Bay.
# 5. Manana fehezin'ny ISP ianao amin'ny tranokala.
Ny ISP sasany dia manakana ny sehatra iray manontolo rehefa manandrana miditra amin'ny The Pirate Bay ianao. Ny sasany miasa mba hanakanana ny atiny izay noeritreretin'izy ireo fa zon'ny mpamorona. Raha tojo izany toe-javatra izany ianao dia afaka manampy ny manandrana iray amin'ireo toerana fitaratra miasa: https://tpb.wiki/.
# 6. Mamorona fifandraisana mivantana.
Raha toa ianao ka miasa tsy misy hatrizay rehefa miditra amin'ny The Pirate Bay, dia ho mora miadana kely ny hafainganam-pifandraisana ataonao. Te-hanandrana hidiranao mivantana amin'ny modem ianao raha toa ka manana tady lava ianao ka ampy hametrahana ity safidy ity. Avy eo, andramo miditra amin'ny fitaratra miasa tsara indrindra ho an'ny The Pirate Bay amin'ny taona 2019 mba hahitana raha misy toeram-piasana ho an'ny olana mety hitranga ISP: Pirate Bay.
Mety misy ihany koa ny olana hafa momba ny fitsabahana ho dinihina. Ny karazana boaty fahitalavitra taloha dia mety hanelingelina ny Internet, na dia tsy nahazo loharanon-karena aza izy ireo. Ny halavany na ny taonan'ny tariby misy anao dia mety hiteraka olana ihany koa. Mety misy ihany koa ny fitsabahana ivelany amin'ny fitaovanao elektronika hafa.
Vantany vao ataonao ny olana mety hitranga amin'ny fanakanana ny hafainganam-pandehanao haingana, dia ho afaka hankafy ny tombontsoa rehetra omen'ny The Pirate Bay ianao isan'andro.